Abakhiqizi nabahlinzeki base-US / 48A (11.5KW) Ifektri yaseChina US / 48A (11.5KW)
Ifektri ngqo 50A 250V AC Type1 Electric Car Power Ishaja American Standard Evse Cable Type 1
Ifektri ngqo i-China EV Ishaja esheshayo, i-EV Ishaja, besikade sisevisi eqhubekayo kumakhasimende ethu akhulayo asekhaya nakwamanye amazwe. Sihlose ukuba ngumholi womhlaba wonke kule mboni futhi sinalo mqondo, kuyintokozo yethu enkulu ukukhonza nokuletha amazinga okwaneliseka okuphezulu kakhulu emakethe ekhulayo.
Izindleko zesiteshi sokushaja se-Level 2, 240 volt (EV)
Isiteshi sesiteshi sokushaja se-Level 2, 240 volt (EV) sikhokhisa noma iyiphi i-EV efinyelela ku-9X ngokushesha ukwedlula indawo ejwayelekile yodonga, enamasethingi we-amperage afinyelela kuma-amps angama-50 (14A-50A) kanye nokufakwa kwe-plug-in noma okwenziwe kanzima. Njengoba kunewaranti elinganiselwe yeminyaka emi-3 ne-ETL efakwe ohlwini lokuphepha ngogesi, ukushaja kwethu i-EV kulula kunoma yimuphi ugesi ukufaka endlini noma ngaphandle. Amashaja we-EVC10 kagesi we-vechile isiteshi sokushaja esinikwe amandla i-Wi-Fi futhi anikezela ngezici zokushaja ezihlakaniphile usebenzisa uhlelo lokusebenza, kufaka phakathi amandla wokusetha ishejuli yokushaja, thola izikhumbuzi zokungena, bona wonke umlando wakho wokushaja endaweni eyodwa, xhuma ne-Alexa , futhi nokuningi.
Ifektri Yezobuchwepheshe yeChina SAE J1772 Level 2 switchable Reserve EV Ishaja
I-Professional Factory yeChina EV Ishaja, Umkhiqizo kagesi, igama leNkampani, lihlala liphathelene nekhwalithi njengesisekelo senkampani, ukufuna ukuthuthuka ngezinga eliphakeme lokuthembeka, ukuthobela i-ISO standard management standard ngokuqinile, ukudala inkampani esezingeni eliphezulu ngomoya wenqubekela phambili- kumaka ukwethembeka nethemba.
I-11.5kw AC EV Ishaja Yokuhweba Uhlobo Lokushayela Imoto Isiteshi Solar EV
Ukuthengiswa okushisayo kweChina Ishaja Yezimoto Ezintsha, Ishaja, Namuhla, manje sinamakhasimende avela emhlabeni wonke, kufaka phakathi i-USA, iRussia, iSpain, i-Italy, iSingapore, iMalaysia, iThailand nePoland. Inhloso yenkampani yethu ukuhlinzeka ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu ngentengo enhle. Besilangazelela ukwenza ibhizinisi nawe!